Yaan nahay - Sichuan Wenyu Electric Co., Ltd.
Xarunta Dambixiyenta AC
Xarunta Dambi-baarista ee DC
Hadafka iyo Kaydinta
WAA KUMA WEYY koronto?
Weiyu Electric, waa hoosaad ay wada leeyihiin shirkad liis gareysan (Stock Code: 300820) -Sichuan Injet Electric Co., Ltd. oo ay la socdaan in ka badan 500 oo shaqaale ah, 22000 workshop aqoon isweydaarsi aan boodh lahayn, 169 shahaado patent ah, 24 sano oo khibrad koronto ah warshadaha tamarta, Injet waxay amaan sare ka heshay shirkadaha caalamiga ah ee caanka ku ah wax soo saarka iyo adeega sare sida ABB, Siemens, Schneider, GE, GT, SGG iyo iwm.
Waxaan jecel nahay abuurista iyo loolanka, waxaan u heellannahay inaan fulino ballanqaadkeenna macaamiil kasta oo mashruuc kasta ah. Waxaan xoojinaynaa iskaashiga jaamacadda iyo machadka cilmi baarista, waxaanna u heellannahay hagaajinta khibrada macaamiisha iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda. Waxba nagama hor istaagi karaan inaan uunka ka dhigno mid fudud oo wax ku ool ah.
Waxaa la aasaasay 2016, WEIYU waa "EVSE" (Qalabka Gawaarida Gawaarida Korantada) ee Sichuan Weiyu Electric Co., Ltd. oo u heellan hal-abuurnimo, tayo, iyo isku halleyn qaybaha beeraha ee warshadaha tamarta. Iyada oo dadaal joogto ah oo ka socda xirfadlaha R & D iyo Iibka & Kooxda Adeegga, Weiyu Electric ayaa durbaba awood u leh soo saarista dhammaan noocyada saldhigyada lacag bixinta ee EV iyo bixinta macaamiisha xal dhammaystiran oo dhammaystiran. OEM & ODM ama kaalmada codsiga injineernimada sidoo kale waa la heli karaa.
MAXAA INA LOO dooranaya?
Inta lagu jiro wax soo saarka maalinlaha iyo wax soo saarka, geeddi-socodka oo dhan wuxuu waafaqsan yahay Nidaamka Hubinta Tayada ee ISO 9001.
Qeybahayaga asaasiga ah waxaa laga soo saaray shirkadayada hooyo -Injet Electric, oo leh 22000 ㎡ aqoon isweydaarsi aan boodh ahayn, Nidaam kasta wuxuu la socdaa heerka ugu sarreeya si loo hubiyo tayada sheyga. Walxaha korantada waa in lagu kaydiyaa bakhaar-qoyaan joogto ah. Dhammaan guddiga wareegga waa in lagu rinjiyeeyaa si ay u ahaadaan kuwo uumiga ka-hortaga, boodhka ka-hortagga, cusbo-tukashada-caddayn, iyo ka-hortagga.
Qaybta barnaamijka waxay ka kooban tahay guddiga wareegga, nidaamka xakamaynta iyo kantaroolaha. Saddexdaas qaybood waxay leeyihiin habraacyo soosaara oo u gaar ah, waa in la raaco si loo hubiyo in si buuxda loogu hoggaansamo shuruudaha naqshadeynta.
Dhammaan softiweerka iyo qalabka waxaa lagu raadraaci karaa oo lala socon karaa lambarka taxanaha ah, taariikhda bixinta, rikoodhka imtixaanka, rikoodhka dalbashada qalabka, diiwaanka baaritaanka alaabta ceyriinka ah iyo diiwaanka iibsiga alaabta ceeriin Waxa kaliya ee aan sameyneyno waa inaan hubino tayada aan ku qancino baahida macaamiisheena.
Waxaan haynaa kooxo xirfadlayaal R&D ah oo leh awood horumarineed oo xoogan. 51 naqshadaha naqshadeynta ayaa horay loo codsaday, lambarkuna si isdaba joog ah ayuu u sii kordhayaa.
Tianyu Science Park Park, No.1 Tumenjiang Wadada, Deyang City, Sichuan, Shiinaha
Saldhigyada Bixinta Ev, Bajaajleyda Baabuurta Korantada, Saldhiga Ev Charge, Bajaajleyda Baabuurta Korantada leh Nooca 2 Bareesada, Saldhigyada Eedaynta Ev, Saldhigga Dacwada Ev,